Isizinda se-Ultrasonic Sisebenzisa i-Hemp njenge-Raw Material - Hielscher Ultrasound Technology
Ukuze isitshalo se-cannabis sativa, izinhlobo ezimbili zingahlukaniswa: i-marijuana ne-hemp.
I-Ultrasonic iyaziwa ngokuthi iyindlela ephakeme yokuhlukanisa i-cannabinoids kokubili, i-mariju ne-hemp.
I-Cannabis ngumndeni wezitshalo ezingahle zihlukaniswe C. Indica futhi C. Sativa. Ukuhlamba kanye nensangu yizinhlobo ze-Cannabis Sativa.
Uma kuqhathaniswa neHemp vs Marijuana, kukhona umehluko omkhulu; ngenkathi i-Hemp iqukethe ukuhlushwa okuphansi kakhulu kwe-THC (0.3% noma ngaphansi), i-Marijuana iningi ku-THC ngokugxila phakathi kuka-15% no-40%.
Ngakho-ke, kuze kube yilapho nje i-hemp ikhule ngokuyinhloko ngenhloso yezimboni. Namuhla, i-hemp ibaluleka ekuvuneni kwe-CBD, futhi. I-CBD iyi-non-psychoactive cannabinoid enezinto zokulwa nokuvuvukala, ze-anxiolytic. I-Marijuana ikhule ngokuyinhloko ngenxa yezinto zayo ze-THC, esetshenziselwa ukuzithokozisa kanye nokwelapha.
Hemp oyela kanye ne-CBD, i-cannabinoid eyinhloko etholakalayo e-hemp, yizinto ezithembisayo ezilawulwayo ukuze zisize ngezimo zezokwelapha ezifana nokukhathazeka, ukuvuvukala okungapheli, izifo ezizimele, ubuhlungu, izinhlungu zomzimba kanye ne-migraine, ukuphazamiseka kwamathumbu, ngaphandle kwamanye.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic ye-Cannabinoids
Ubuchwepheshe be-ultrasonic ubuchwepheshe bukhulu kakhulu ukukhulula ama-active acids (okungukuthi i-cannabinoids (I-CBD, I-THC, i-CBG), Amafutha abalulekile, Terpenes njll) kusuka emthini wezitshalo ezifana namahlumela, amaqabunga, neziqu.
Isizinda se-ultrasonic siphumelela ngaphandle kwamasu amasu avamile okukhipha izinkathazo eziningana izinzuzo ezihlukahlukene:
Isizinda se-Ultrasonically-basizwa (UAE) saziwa kakhulu njengenqubo yokwandisa inqubo, eyenza ngcono ukudluliselwa kwamandla nokukhishwa Izithelo Eziphakeme yamakhemikhali e-bioactive njenge-cannabinoids, i-terpenes njll.
I-Ultrasonication iveza izitshalo eziphezulu ngoba isizinda se-ultrasonic asidingi ukusetshenziswa kwamakhemikhali anonya, ayenobuthi ukuze akhululwe ama-cannabinoids. Isizinda se-ultrasonic singasetshenziswa ngamanzi, ingxube yamanzi, utshwala noma amafutha (umnqumo, ukhukhunathi) njenge Izixazululo, Ngokwesibonelo. Lokhu kwenza isizinda se-ultrasonically-basizwa (UAE) kakhulu umlingani wezemvelo.
Izimo zesikhumba esincane somphumela we-UAE ku-extract, enikeza okufanayo, kodwa izakhiwo eziqinile zomsindo (isib. I-hemp, i-marijuana) - enikeza imiphumela ephakeme yempilo, ukunambitheka, nokuphunga.
I-extractors ka-Hielscher ultrasonic ingalawulwa ngokuqondile. Ngokulawula ngokugcwele emigomeni yenqubo njengobuningi nokushisa, ikhwalithi ephakeme kakhulu yokukhipha ingatholakala. Njengoba sonication kuyinto a non-thermal indlela yokucubungula, ukuchithwa okushisayo kwezinsimbi ezibhekene nokushisa kugwenywe. Ukushisa kwamazinga okushisa phakathi kuka-0-60 ° C kulungele ukukhishwa okuphakeme.
Enye inzuzo ye-UAE yiyona inqubo esheshayo: Inqubo yonke yokukhipha ithatha amaminithi ambalwa ukukhulula ama-cannabinoid kusuka kumaseli esitshalo, kanti amanye amasu okukhishwa adinga amahora noma ngisho nezinsuku zokucubungula isikhathi.
Kokubili, izindleko zokutshala izimali kanye nokusebenza akuzona eziqhathaniswa nokuqhathaniswa namanye ama-extractors, isib. CO supercritical2 ama-extractors. Izinhlelo ze-ultrasonic izizinda zine I-RoI esheshayo kakhulu.
UP400St ukukhishwa kwama-cannabinoid kusuka ku-hemp
Ukufakwa kwama-Hielscher I-UIP4000hdT, udoti we-4kW ultrasonic, we-industrial extraction.
U-Uma Altaf, A Rouf, uVarsha Kanojia, uQudsiya Ayaz, u-Imtiyaz Zargar (2018): Ukwelashwa kwe-ultrasound: I-innovative technique yokulungisa ukudla. I-Pharma Innovation Journal 2018; 7 (2): 234-241.
U-Renata Vardanega, u-Diego T. Santos, uMnuz Angela A. Meireles (2014): Ukuqiniswa kwezinto eziphilayo eziyinkimbinkimbi ezivela kwezitshalo zokwelapha usebenzisa irradiation ye-ultrasonic. Umfundisi we-Pharmacogn 2014 Jul-Dec; 8 (16): 88-95.
Isizinda se-Ultrasonic siphumelele kumasu ephumelela kakhulu nangomsebenzisi-friendly uma kuziwa esikhwameni samakhemikhali e-bioactive kusuka ku-botanicals. Isibonelo esivelele kunazo zonke sokufakelwa okuphumelelayo kungase kube ukuhlukaniswa kwe-CBD nezinye izidakamizwa ezivela ku-cannabis.
Ultrasonic vs. Izindlela zokwelapha ezivamile
Ukungena ku-ethanol kuyindlela elula, kodwa isikhathi esiningi kakhulu, inqubo yesikhundla sinciphile futhi izindleko zokuxazulula kanye nezamandla ziphezulu. I-solvent ehlala njalo emkhiqizo wokugcina iphazamisa umgomo wokukhiqiza ukukhishwa okusezingeni eliphezulu.
Ukusetshenziswa ngokusebenzisa uhlelo oluvaliwe lwe-hydrocarbon kudinga ukusetshenziswa kwamafutha, ukuze izinto ezibangelwa umdlavuza ezifana ne-benzene zingatholakala kumkhiqizo wokugcina.
I-CO eqoshiwe2 izinhlelo zokufakelwa ziphezulu ezindleko zokutshala izimali kanye nokusetshenziswa kwamandla. I-CO eqoshiwe2 I-extractors idinga abasebenzi abaqeqeshwe kahle ukuba basebenze kusukela CO yokucindezela phezulu2 izinhlelo ziyingozi ukusebenzisa. Uma i-CO2 ukuvuza kungabangela ukufa kwabasebenzi okwamanje.
Isizinda samanzi esiyingqayizivele kungenye indlela ephathelene nemvelo-friendly, okuyinto ephuthumayo futhi ikhishwa kuphela ingxenyana encane yezinhlanganisela eziphilayo.
Isizinda se-ultrasonic yindlela yokuqinisa yesikhumba engasetshenziswa ngokuhlanganiswa nayo amanzi (okungenasombululo) kanye ne Izixazululo ezifana ne-ethanol, i-ethanol-water, i-glycerin, i-methanol, i-vegetable oils noma ezinye izixazululo ozikhethelayo. Isizinda se-Ultrasonic sithuthukisa ukudluliswa kwamandla ukuze ukhiqize isivuno sika 95-99% ingatholakala. I-Sonication ingenziwa kalula futhi ikhiqize izitshalo eziphezulu.
Udoti omncane we-ultrasonic onjalo I-UIP400St (400W) iyakwazi ukucubungula i-batch efika ku-10L phakathi no-5-15maminithi (kuye ngokuthi imingcele yezinqubo ezifana nokusetshenziswa okuluhlaza (okusha noma omisiwe; amaqabunga, amaqabunga, iziqu), i-solvent, izinga lokushisa). Umklomelo we-2kW onamandla we-ultrasonic I-UIP2000hdT ingaqhutshwa njengesistimu ehleliwe. Kumodi yokugeleza, i I-UIP2000hdT kalula ihamba 200 kuya ku-800L / hr (futhi kuye ngokuthi inqubo yezinqubo).
Izindleko zokutshala izimali zeproshini ye-ultrasonic ziphansi uma kuqhathaniswa ne-CO2 umcwaningi. Futhi izindleko zamandla zokusebenza azizinaki. I-ultrasonic extractors iphephile kakhulu ukusebenza, kulula ukuhlanza futhi idinga ukugcinwa okuphansi kakhulu.
Izakhi eziphilayo ze-cannabis (kokubili, isitshalo se-hemp nesangu) ziye zathola ukunakwa okuningi esikhathini esidlule esiseduze. Ikakhulukazi ye-Cannabidiol ye-cannabidiol (i-CBD) izinzuzo eziningi zezempilo ziboniswe, ezifinyelela emithini yokulwa nomdlavuza kanye nezakhiwo eziphikisayo ukuze kutholakale ubuhlungu-ukukhulula nemiphumela ephikisayo. Ngaphandle kwe-cannabidiol, isitshalo se-cannabis siqukethe izinhlobo eziningi ze-cannabinoids njenge-THC (tetrahydrocannabinol), i-cannabinol (i-CBN), i-cannabigerol (i-CBG), i-cannabichromene (i-CBC), ne-cannabinodiol (i-CBND). Ama-cannabinoids abonise amandla amakhulu okuhlinzeka futhi asezinhlobonhlobo zocwaningo zocwaningo eziningi.
Ukusebenzisana kwama-cannabinoids ahlukahlukene nezinye izinto ezixubile njenge-terpenes, polyphenols, flavonoids, kanye ne-alkaloid kubukeka sengathi kuholela ezinzuzweni ezingcono kakhulu zezempilo. I-interplay yama-terpenes ahlukene, ama-cannabinoids ahlukile nezinye izakhi zezitshalo kuthiwa “umphumela we-entourage”. Ngenxa yempembelelo ye-entourage, ukukhishwa kwe-spectrum egcwele, okungatholakala ngokuphumelelayo nge-ultrasonically-assisted extraction (UAE), yaziwa ngemiphumela yokwelapha ehlukile.
I-terpenoids yizingxenye ezibalulekile zamafutha, ezitholakala kubhodals. Isitshalo se-cannabis sicebile kakhulu Terpenes. E-cannabis, ama-terpenes enziwa kuma-trichomes wesitshalo. Ama-trichomes ayizicucu ezicwebezelayo, ezinamathelayo ezinamathela emaqabungeni nasezimbali. La ma-trichomes ayindlela yokuvikela yemvelo yesitshalo se-cannabis, esivikela isitshalo ezifweni nasezinambuzaneni. Ngenxa yephunga elimnandi, ama-terpenes enza okuphindisayo. Kithina bantu, isici esibonakala kakhulu se-cannabis terpenes yiphunga labo. Lawa ma-terpenes afaka izinzuzo eziningi zezempilo zesitshalo se-cannabis (i-hemp nensangu).
Ngaphandle kwephunga elimnandi nelithunga elimnandi, ama-molecule e-terpene anezinto ezinamandla ezitshalo ezithinta izidakamizwa ezihlukahlukene.
Kokubili inambuzane kanye ne-hemp ye-Cannabis Sativa ihlobo lunezibalo eziningi ze-terpenoids futhi liqukethe izinhlobo ezingaphezu kwezingu-100 zalezi zinto.
I-terpene ngayinye inezakhiwo ezihlukile ezisukela ekuvukeni kuya ekuphakamiseni. Isibonelo, i-nerolidol inemiphumela yokuvumelanisa nokulwa nokukhathazeka, i-linalool isiza ukuphatha izimpawu zokukhathazeka ne-arthritis, kanti i-myccene iyaziwa edambisa izinhlungu ezingapheli. Ama-terpenes β-Myrcene, Ɣ-pinene kanye ne-humulene anciphisa ukuvuvukala futhi abe nemiphumela ye-analgesic.
I-terpenes ehlukahlukene iyingqayizivele e-cannabis, kodwa eziningi ze-terpenes ezitholakala ku-cannabis zikhona kwezinye izitshalo eziningana, futhi. I-caryophyllene itholakala isib egumbini elihlaza okwesibhakabhaka, Hops kanye ne-rosemary ne-oregano. I-Limonene yiyona terpene enkulu etholakala ezithelo zamawolintshi ezinjengolamula namawolintshi.
I-terpene ngayinye iyaziwa ngemiphumela ethize yokwelapha. Kodwa-ke, ama-terpenes nezinye izinhlanganisela ze-botanical ezifana ne-polyphenols ne-flavonoid ziyaziwa zibonisa imiphumela ehlukile yes synergetic, okuholela ekutheni kube ne-Symbiosis ethuthukisiwe phakathi kwe-cannabinoids. Lokhu kuhlangana kwezindlela ezixubile zezinto eziphilayo ezaziwa ngokuthi “umphumela we-entourage“.
Umthelela we-entourage wenza ama-terpenes aphinde atholakale kakhulu futhi atsize umzimba ukuthi uthathe ama-cannabinoids ngokuphumelelayo.
Izinhlobo ze-Bioactive Compounds
Inombolo, ukuhlushwa nokuhlukahluka kwamakhemikhali e-bioactive kubhekene nemithi yokwelapha ye-extract ye-botanical. Lezi zinhlanganisela ze-bioactive zihlanganiswa njenge-metabolites yesibili, engabambi ekukhuleni noma kwi-photosynthesis ezitshalweni. Noma kunjalo, zibalulekile ezitshalweni’ ukusinda nokuxhumana nemvelo yayo. Amakhemikhali e-botanical bioactive angafakwa kabanzi emaceleni amathathu ase-terpenes kanye ne-terpenoids, ama-alkaloids, nama-phenolic compounds. Ama-phenolic compounds yiqembu elalisakazwa kabanzi kunazo zonke ze-metabolites yesibili embusweni wezitshalo futhi ziyaziwa futhi zithandwa ngemiphumela yazo ye-antioxidative. Esinye isigaba esibalulekile samakhemikhali ama-phenolic esisisindo esincane esincane kakhulu yi-flavonoids, ekhombisa imiphumela enamandla kakhulu ye-antioxidative, futhi.
Ububanzi bezinhlanganisela ze-phenolic zihlanganisa i-phenolic acid njenge-benzoic ne-hydroxycinnamic acid, i-flavonoids njenge-flavones ne-flavonols, i-lignans, ne-stilbenes. Ukukhishwa kwe-spectrum ephelele (isb. Etholakalayo Isizinda se-ultrasonic kusuka ku-cannabis) ihlanganisa zonke lezi zakhi ezihlukahlukene ze-botanical, ezibonisa imiphumela yempilo ebanzi kakhulu.
Isizinda se-ultrasonic sisekelwe kuma-acoustic agesi (i-ultrasound) ehlanganiswe ibe yi-media ye-liquid. Amagagasi amakhulu e-ultrasound enza umjikelezo ophansi / ocindezelayo ophansi. Ngenxa yokungafani kwezingcindezi ngesikhathi kusakazwa amaza e-ultrasound nge-liquid, ama-bubble ama-cavitation ayenzeka. I-implosion yalezi zinhlayiya ze-cavitation iholela ezimweni ezinamandla-ezinomsoco.
Isizinda se-ultrasonic samakhemikhali asebenzayo namafutha abalulekile kusekelwe esimisweni sokusebenza i-acoustic cavitation. Isibalo esingenhla sibonisa umphumela wokuwa kwe-cavitation bubble nokukhululwa kwamafutha abalulekile okuvela emthini wesitshalo
Umthombo: Altaf et al. 2018
Izimo eziseduze ne-imploding bubbles cavitation zingaba ngokweqile – kukhiqiza amazinga okushisa afinyelela ku-4500 ° C nezingcindezi ezifika ku-100 MPa. Ukwehlukahlukana okuphindayo nokuholela kokuphumula kuphumela emandleni aphezulu kakhulu e-shear nezidubedube endaweni eshisayo ye-cavitational. Ukuhlanganiswa kwalezi zinto zokuhlukaniswa kwengcindezi, umehluko wokushisa kanye nokugunda izinwele kugqugquzela ukuthunyelwa kweningi futhi ngaleyo ndlela izinqubo zokukhishwa. Ngamandla amakhulu we-ultrasonic cavitation, amaseli (isb. Zezitshalo, amagciwane, noma izicubu) ayaphazamiseka futhi izinto ezingaphakathi (ezinjengamafutha, i-lipid, amaprotheni, nezinto ezisebenzayo) zidedelwa ku-solvent ezungezile.
Ngakho-ke isizinda se-ultrasonic yindlela ekhethiwe yokuqinisa izinqubo zesikhumba.